Manentana ny FVTM mba hametrahana tahirim-bola manokana ho fiatrehana ny loza - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
104 taona amin’ity taona ity no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy. Inona no vokany ?
Ho anay Fikambanan’ny vehivavy tantsaha eto Madagasikara na FVTM ny fankalazana ny 8 marsa dia
Natao hanehoana hevitra sy hitakiana ny zo mahaolona sy zo ara-politika, ara-ekonomika sy ara-tsosialy araka ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay efa nankatoavin’ny Firenena malagasy ka lasa lalàna velona eto amintsika.
Mihasarotra ny hiatrehan’ny tantsaha ny famokarana ataony sy ny fivelomany amin’ity taona ity sy ny taona hoavy manaraka. Natao izao mba hifampizarana, hiarahana mitady vahaolana amin’ny sehatra rehetra sy antanan-tohatra samihafa.
Ny vehivavy tantsaha sy ny covid-19
Sahirana toy ny firenena rehetra i Madagasikara noho ny fisian’ny Covid-19. Tsy tena nandavo ny ankamaroan’ny tantsaha anefa izany noho ny fampiasana ny raokandro malagasy, amin’ny fitenehana ravinkazo sy ny fanaovana hevoka. Hita fa ny tazomoka no tena mbola mandavo ny tantsaha hatramin’izao. Betsaka ny matin’ny tazomoka eny amin’ny tontolo ambanivohitra araka ny tatitra nataon’ny mpikambana manerana ny Nosy. Nahitana fisondrotana ny fanafody nandritra ny fihibohana. Niakatra ihany koa ny tahan’ny herisetra teo anivon’ny tokatrano vokatry ny tsy fahampian’ny enti-manana ara-bola. Niteraka fikorontanan-tsaina teo amin’ireo ray amandreny tantsaha sy ny zanak’izy ireo satria tsy afaka nivarotra malalaka ny vokatra ka nihena ny vola niditra isan-tokantrano. Ny voatabia iray sobika tokony mitentina 12000Ar tao amoron’i mania tamin’ny volana aogositra 2020 dia natakalo sira 1kilao izay tokony mitentina 1000Ar.
Ny fiovan’ny toetr’andro
Manoloana ny fahataran’ny rotsak’orana izay saika hita nanerana ny Nosy. Tany amin’ny faritra sasany dia tsy nahitana izany raha tsy tamin’ny volana febroary lasa teo. Niharatsy sy simba ny nofontany, nitombo ny biby mpanimba ny voly toy ny valala tao amin’ny faritra Menabe, sy ny Sababaka bibikely mpihinana ny voly tao amin’ny faritra Sofia ohatra.
Nanoloana izany dia nisy ny ezaka nataon’ny tantsaha, niainga tamin’ny fampiasana ny teo am-pelatanany sy ny traikefa ary ny fahaiza-manao nananany nentiny niatrika izany fahasahiranana izany. Nampiasaina ny ravina voandelaka nentina namonoana bibikely mpanimba voly. Nahatonga saina ny ankamaroan’ny tantsaha ny tsy fahampian’ny rotsak’orana ka nahatonga azy ireo tsy hanao tavy intsony.
Ho mafy ny zavatra hitranga ho an’ny tantsaha sy ireo vehivavy tantsaha ary ny ankohonany. Hihena arak’izany ny fidiram-bolany. Manainga ny fanjakana sy ny mpiara-miombon’antoka ara-tekinika sy ara-bola mba hametraka tahirim-bola manokana mba hiatrehan’ny tantsaha ny fiantraikan’ny Covid-19 sy ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Tahirim-bola manokana ho fiatrehana ny fiantraikan’ny Covid-19 sy ny fiovan’ny toetrandro - Ny fananganana tahirim-bola manokana hiatrehana ny Covid-19 sy fiovan’ny toetrandro dia efa zavatra ataon’ny firenena matanjaka rehetra eto ambonin’ny tany, amporisihina ny Fanjakana malagasy hitaky eo anivon’ireny fikambanana iraisam- pirenena toy ny FMI, ONU, OUA, SADC..., hampanjary ny fananganana io tahirim-bola manokana sy fiovan’ny toetrandro io ao anatin’ny fotoana fohy. Fa mialohan’izay, dia tokony haneho fahavononana isika malagasy amin’ny fanokanana ao anatin’ny teti- bolam-panjakana io tahirim-bola manokana io. Ny ho fahombiazan’izany dia ny fametrahana rafitra fitantanana mifototra amin’ny fangaraharahana sy andraisan’ny rehetra anjara amin’ny fitantanan’azy.
Tsapa fa mihena ny lanjan’izany 8 marsa izany hatramin’izay nankalazaina azy izay. Lasa fisehoana ivelany amin’ny lafiny fety sy kabary isan-karazany, nefa dia tokony ho asa fandinihina sy adi-hevitra, mifantoka amin’ny fitadiavana ny vahaolana mahakasika ny fanatsarana ny fiainan’ny vehivavy sy ny ankohonany, indrindra fa ny vehivavy tantsaha.
Fitadiavana fifamenoana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy amin’ny asa atao, ny fiatrehana ny fiainana hahafahana manafaingana ny asa fampandrosoana lovain-jafy ny miralenta araka ny fahitan’ny vehivavy tantsaha azy fa tsy filana sotasota amin’ny lehilahy.
Samy manana ny hamaritany ny atao hoe fandrosoana ny tsirairay, fa raha ny tokony ho izy dia vina iraisana no mampandroso.
Adidin’ny fanjakana ny fanatanterahana ny fisitrahan’ny isan-tokantrano ny isam-batan’olona ny sakafo, ny fahasalamana, trano fonenana, fanabeazana sy fahalalana, asa satria zo fototra ara-toe-karena sy ara-tsosialy izany, izay arovan’ny Lalam-panorenana ao amin’ny andininy 17 ka hatramin’ny 39.